आमाले तरकारी बेचेर पढाएको छोरा जिल्लाकै पहिलो पाइलट बने ! सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !! – PanchKhal Online
Home/समाचार/आमाले तरकारी बेचेर पढाएको छोरा जिल्लाकै पहिलो पाइलट बने ! सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
आमाले तरकारी बेचेर पढाएको छोरा जिल्लाकै पहिलो पाइलट बने ! सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
तरकारी खेतीमा आफ्नो सन्ताको सपना देखेका बाबू आमा र छोराको अडिक लक्ष्यको कारण सबै पुरा भएको र हिजो खिसी गरेर उडाउनेहरु नै आज रोल्पाको एक मात्र पाइलट भनेर छोराको प्रसंशा गरेको देख्दा आफुमा खुसीको सिमा नै नरहेको आमाको भनाइ छ । मध्यवर्गिय परिवारका शिव यतिबेला रोल्पाकै उदाहरण बनेका छन् । उनी अहिले बुद्ध एयरको विमान नेपाल र भारतको आकाशमा सधैजसो उडाउने गर्छन् ।
भीडलाई हेरेर रविले म ‘बादसाह’ हुँ भन्ने नसोचे हुन्छ– किशोर श्रेष्ठ
संसारलाई चकित पार्ने दाजुबहिनी, ९५ वर्षको उमेरमा स्नातकको पढाइ पूरा
खबरदार ! अब ज्ञानेन्द्र शाहि एक्लै छैनन, सबै नेपाली आउछन क-कसलाई कुट्छाै?बिनय बस्नेतको ठाडो चेतावानी….(हेर्नुहोस् भिडियो)